आइ लभ ट्राभलिङ | गायक गायिकाको घुमघाम रुची
आइ लभ ट्राभलिङ
May 6th, 2018 - 10 min read
घुम्न असाध्यै रुचाउने गायक हुन् प्रमोद । झन उनको त पेशै घुमिरहने ! दर्शक/श्रोताका प्रिय यि गायक भन्छन्, ‘आफ् नो त कामै यस्तो पर्यो कि स्टेज कार्यक्रमका सिलसिलामा देशविदेश घुमिरहनुपर्छ ।’ हालसम्म उनले ३३ वटा देश र नेपालभित्र ६७ जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म घुमेकामध्ये उनलाई देशभित्र इलाम र पोखरा असाध्यै मनपर्छ । ‘इलाम र पोखराको सुन्दरताले लोभ्याउँछ, गृह जिल्ला झापा त मेरालागि सधैँ प्यारो,’ उनले देशभित्रका मनपर्ने ठाउँ यसरी बताए । यूरोप र अमेरिका पुग्नु ‘ड्रिम’ थियो जहाँ उनी घुमिसके । ‘अब साउथ अफ्रिका र मस्को जान मन छ,’ उनले आफूलाई घुम्न मन लागेको देशबारे खुलाए । घुमफिरका क्रममा प्रमोदलाई केकुराले बढी लोभ्याउँदो हो ? ‘मलाई प्राकृतिक कुराहरूले बढी लोभ्याउँछ,’ प्रमोद भन्छन्, ‘म प्रकृतिसँग बढी रमाउँछु । नेपालको सोलु पुग्दा होस् या क्यानेडाको बाम्फ, खुब इन्जोय गरेको छु । ’ उनलाई धेरै कठिन यात्रा गर्न गाह्रो लाग्छ रे । भन्दै थिए, ‘म सुविधाजनक ठाउँ घुम्न बढी रुचाउँछु ।’ उनका लागि घुम्नु भनेको रमाइलो लिनुमात्रै होइन, अध्ययन गर्नु पनि हो । ‘माइन्ड त फ्रेस हुन्छ नै, सँगसँगै त्यो देश, त्यो ठाउँ र त्यो परिवेशको बारेमा धेरै ज्ञान पनि लिन सकिन्छ,’ उनले भने । विदेश यात्राका क्रममा उनी सपिङ गर्न खुब रुचाउँछन । नयाँ/नौलो कुरा र ब्राण्डेड समान देख्नै हुन्न, किनिहाल्ने बताउँछन् । घुमघामका क्रममा उनले भोगेको सबैभन्दा यादगार क्षण के होला ? ‘त्यस्ता यादगार क्षण छन्,’ प्रमोद भन्छन्, ‘स्वदेश भ्रमणका क्रममा रमाइला पलहरू धेरै भोगियो, सँगसँगै अप्ठेरा पल पनि । २–४ पटक दुर्घटनामा परेर पनि ज्यान बाँचेको अवस्था छ ।’ प्रमोदको पहिलो विमान यात्रा यति एयरलाइन्सबाट सुरु भएको रे । ‘तर सबैभन्दा बढी चढेकोचाँही बुध्द एयरलाइन्स हो,’ प्रमोदले सुनाए ।
पछिल्लो समयकी एकदमै व्यस्त गायिका हुन्– मेलिना राई । स्टेज कार्यक्रममा देश-विदेश घुमिरहने मेलिनाको पहिलो रुची त गायन नै हो । ‘तर गायनपछिको दोश्रो रुचीचाँही घुमघाम हो, आइ रियल्ली लभ ट्राभलिङ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा क्रममा उनी थुप्रै देश घुमेकी छिन् । ठ्याक्कै कति त्यो त उनले भनिन् । तर यूरोप, फ्रान्स, स्वीजरल्यान्ड, यूके, कोरिया, हङकङ, अष्टे«लिया, कतार, दुबई, मलेसिया लगायत देशको नाम लिइन् । स्वदेशमाचाँही विशेषगरी पूर्वका ठाउँमा बढी कन्सर्ट हुने गरेकाले त्यता बढी घुमेको उनले बताइन् । घुमेकामध्ये सबैभन्दा मनपरेका ठाउँहरूचाँही इलाम, पोखरा, चितवन र धनकुटा रे । घुमेकामध्ये मनपरेको देशचाँही कुन हो त ? भन्ने प्रश्नमा पनि उनको जवाफ अरुको भन्दा फरक सुनियो, ‘मलाई त सबैभन्दा मनपरेको देश नेपाल हो । किनकी म जति नै आलिसान ठाउँमा पुगेपनि आफ्नो देश जहिल्यै याद आउँछ । यहाँको जस्तो आत्मियता म अरु देश पुग्दा पाउँदिन ।’ उनलाई घुम्न मन लागेको देशचाँही क्यानेडा हो ।
घुम्दाखेरी उनलाई सबैभन्दा बढी केकुराले लोभ्याउँछ ? भन्छिन् , ‘मलाई जाडो ठाउँहरू बढी घुम्न मनपर्छ । झन् त्यसमाथि स्नो फल हुने ठाउँहरू, पहेँलो र सुन्तला रङका पातका रुखहरू देख्दा मनै हराउँछ ।’ उनको नजरमा घुम्दाका फाइदा अथाह छन् । भन्छिन्, ‘घुम्दाखेरी नयाँ–नयाँ ठाउँका बारेमा नयाँ–नयाँ कुरा जान्न÷सिक्न पाइन्छ । नयाँ–नयाँ अनुभव गर्न पाइन्छ । विभिन्न देश, विभिन्न ठाउँका संस्कार÷संस्कृतिबारे जान्न पाइन्छ ।’ घुम्दा उनलाई खुशी लाग्छ रे । ‘अनि संसारमा खुशी हुनुभन्दा ठूलो कुरा अर्को के हुनसक्छ र ?,’ उल्टै प्रश्न गर्छिन् उनी ।
बादल लिम्बु, गायक/संगीतकार
घुमघामबारे कुरा गर्ने भन्नेवित्तिकै युवा गायक तथा संगीतकार बादल लिम्बु अचानक उत्साहित भए । अनि उनको मुखबाट निस्किएको वाक्य थियो, ‘आई लभ ट्राभलिङ ।’ स्वदेशमा उनी विशेषगरी पूर्वका थुप्रै जिल्ला घुमेका छन् । विदेशमा हङकङ पुगेका छन् । उनलाई आफ्नै गृह जिल्ला झापा र छिमेकी जिल्ला इलाम एकदमै मनपर्छ रे । ‘झापामा पनि झिलझिले भन्ने ठाउँ मलाई गइरहन मन लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका दर्शकले दिने माया अनि विशेषगरी सुरज रिङालुङ दाईले गर्ने प्रेम म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।’ हङकङ पनि उनलाई साह्रै मनपरेको रहेछ । ‘त्यहाँ पुग्दा नेपालीहरूको मायाप्रेमले गर्दा आफ्नै देशमा छु जस्तो महसुस भएको थियोे,’ उनले सुनाए । नेपाललाई धेरैले स्वीजरल्यान्डजस्तो बनाउने भनेर दिएको भाषण सुनेरै उनलाई स्वीजरल्यान्ड एकदमै घुम्न मन लागेको छ रे । ‘सबैले नेपाललाई स्वीजरल्यान्डजस्तो बनाउने भन्छन् । त्यसैले पनि कस्तो होला त्यो ठाउँ भनेर एकपल्ट हेर्ने रहर छ,’ उनले भने । बादललाई जुनसुकै ठाउँ घुम्दा पनि खासगरी त्यहाँको मौलिकताले तान्छ रे । ‘सबै ठाउँको आ–आफ्नो विशेषता हुन्छ, म त्यँही विशेषता जान्न खोज्छु,’ उनले भने । विशेषगरी आफू पहाडी क्षेत्रमा घुम्न रुचाउने उनी बताउँछन् । बादल घुम्न रुचाउनुको खास कारण के हो ? भन्छन्, ‘घुम्नु भनेको जीवनमा नयाँ नयाँ अनुभव बटुल्नु हो । म मेरो जीवनलाई अनुभवहरूको संगालो बनाउन चाहन्छु । ’ बादलले स्वदेशमा यात्रा गर्दा बढी बुध्द एयरलाइन्सको प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।
घुम्न असाध्यै रुचाउने गायकभित्र पर्छन्– रेवत राईं । पूर्वका अधिकांश जिल्ला र पश्चिमका केही जिल्लामा उनी पुगिसकेका छन् । विदेशमा दक्षिण कोरिया, हङकङ, यूके, भारत लगायत देश घुमेका छन् । अहिलेसम्म घुमेका मध्ये स्वदेशमा उनलाई पोखरा मनपर्छ । ‘पोखराको प्राकृतिक बनोट र स्वच्छ वातावरणले लोभ्याउँछ,’ उनले भने । विदेशमा बेलायतले उनको मन छोयो रे । ‘बेलायतको हावापानी, सहरीकरण, नियम, समाज अनि भुबनोटले मलाई छोएको हो,’ उनले सुनाए । क्यानडा उनलाई घुम्न मन लागेको देश हो । घुम्दाखेरी सम्बन्धित ठाउँको मनोरम दृश्यले उनलाई लोभ्याउँछ रे । ‘प्राकृतिक रुपमा मनोरम ठाउँतिर घुम्न मन लाग्छ मलाई,’ उनले भने ।
एन्जिला रेग्मी, पपगायिका
पप–गायनमा जम्दै गरेकी गायिका एन्जिला रेग्मीलाई पनि नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न एकदमै मनपर्छ । कार्यक्रमका सिलसिलामा स्वदेशका थुप्रै जिल्ला पुगिसकेकी छिन् । रुपन्देही, नवलपरासी, झापा, इलाम, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, गुल्मी, गोरखा, भक्तपुर, बर्दिया, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, कपिलवस्तु लगायत ठाउँमा उनी घुमिसकेकी छिन् । विदेशमा थाइल्यान्ड र दुबई पुगिसकेकी छिन् । अहिलेसम्म पुगेकामध्ये उनलाई एकदमै मनपरेको ठाउँ हो– ताप्लेजुङ र पोखरा । ‘ताप्लेजुङको मौसम, त्यहाँका मान्छेको स्वागत, सत्कार र बोलिवचन मलाई एकदमै मनपरेको हो । त्यस्तै पोखराको त सुन्दरताले नै लोभ्याएको हो,’ उनले मनपर्नुको कारण खुलाइन् ।
दुबई उनलाई एकदमै मनपरेको देश हो । कारण– त्यहाँको विकास, व्यवस्था र कानुन । ‘सबैकुरा एकदमै व्यवस्थित भएको र छोटो समयमा निकै विकसित भएको कथाले झन छोयो,’ उनले सुनाइन् । उनलाई घुम्न मन लागेको ठाउँचाँही नेपालको रारा ताल, मनाङ र मुस्ताङ रे । एन्जिलालाई शान्त ठाउँहरूमा घुम्न असाध्यै मनपर्छ रे । ‘दुर्गम ठाउँहरूमा पुगेर त्यहाँका मान्छेहरूसँग भेट्न, उनीहरूको जीवनशैली बुझ्न एकदमै मनपर्छ,’ उनले बताइन् । उनको विचारमा घुम्दाका फाइदा धेरै छन् रे । ‘नयाँ–नयाँ कुरा जान्न पाइन्छ, त्यहाँको संस्कार र संस्कृति बुझ्न पाइन्छ,’ उनले घुम्नुको फाइदा बताइन् । उनी जब नयाँ–नयाँ ठाउँ पुग्छिन्, त्यहाँको विशेष चिनो किन्न रुचाउँछिन् । ‘विदेशतिर जाँदा म धेरै सपिङ गर्छु, आफ्नालागि मात्र नभएर सबै परिवारका लागि गर्ने गर्छु,’ उनले भनिन् ।
बैंककको १० दिनको टुर उनको जीवनकै पहिलो विदेश टुर हो रे । र, त्यो टुर आफूले कहिल्यै नबिर्सने उनी बताउँछिन् । ‘त्यो मेरो लागि एकदमै ठूलो र अद्भुत अनुभव थियो,’ उनले सुनाइन् । नेपालभित्र यात्रा गर्दा उनी बुद्ध एयरलाइन्स बढी प्रयोग गर्ने बताउँछिन् ।
दीपा लामा, गायिका
पाश्र्व गायनमा जम्दै गरेको नाम हो– दीपा लामा । दीपा पनि नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न खुब रमाइलो मान्छिन् । कन्सर्टका क्रममा उनी नेपालका पूर्वी भागमा थुप्रैपल्ट पुगेकी छिन् । कार्यक्रमको सिलसिलामा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, खोटाङ, भोजपुर, पोखरा लगायत ठाउँ घुमेको उनले बताइन् । विदेशमाचाँही कोरिया र कतार पुगेकी छिन् । ‘दुवै देश मलाई मनप¥यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँको वातावरण नै कति सफा र मनमोहक क्या ! म त जहाँजहाँ घुम्थे, त्यहाँको सुन्दरताले उतै लोभिन्थेँ ।’ स्वीजरल्याण्ड उनको ‘ड्रिम कन्ट्री’ हो रे जहाँ एकदिन पुग्न चाहन्छिन् । ‘तस्बिरमा हेर्दैहेर्दै अहिले पुग्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ थोरै मुस्कुराउँदै उनले चाहना व्यक्त गरिन् । दीपालाई बढी प्राकृतिक वातावरणले लोभ्याउँछ रे । ‘कतै हरियाली वातावरण भेटेँ भने खोइ किन हो म उतैको कल्पनामा हराइदिन्छु,’ उनले सुनाइन् । घुम्दाका फाइदाबारे सोध्दा उनले पनि प्रमोद र मेलिनाको भन्दा फरक जवाफ बताइनन् । उस्तै जवाफ दिइन्, ‘नयाँनयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ, नयाँ ठाउँको संसकृतिलाई नजिकबाट नियाल्न पाइन्छ ।’ घुमघामका क्रममा उनी त्यति धेरै सपिङ गर्दिनन् रे । भन्छिन्, ‘म फजुल खर्च गर्न रुचाउँदिन, आवश्यक परेको खण्डमा मात्र सपिङ गर्छु ।’ ताप्लेजुङको हिरक महोत्सवमा पुग्दाको लामो यात्रा उनी जीन्दगीमा कहिल्यै नभुल्ने बताउँछिन् । ‘एकदमै लामो यात्रा गर्नुपरेको थियो त्यो पनि बसमा,’ उनी सम्झिदै हाँसिन् ।
प्रिती आलेमगर, लोकदोहोरी गायिका
लोकदोहोरी संगीतमा पहिलोपल्ट गायक प्रकाश सपुतसँग मिलेर ‘दोहोरी ब्याटल’ गाएपछि प्रितिआले मगर अहिले चर्चामा छिन् । यि गायिका पनि जीवनलाई घुमफिरदेखि टाढा लान सक्दिनन् । भन्छिन्, ‘कार्यक्रमका क्रममा धेरै घुमिरहेको हुन्छु त्यही पनि पुग्दै÷पुग्दैन्, घुमिरहन मनपर्छ ।’ नेपालको करिब ६० जिल्ला घुमिसकेको बताउने प्रिती देशबाहिर १५ बढी देश घुमेको बताउँछिन् । स्वदेशमा उनलाई सबैभन्दा मनपरेको स्थान मुगुको रारा ताल हो । ‘त्यहाँ फेरी पनि जान मन छ,’उनले भनिन्, ‘त्यहाँको स्वच्छ वातावरण, प्राकृतिक सुन्दरता...ओहो ! सम्झिदा पनि सपना जस्तो लाग्छ त्यो पल । लगभग ८ वर्षअघि घुम्न गएको थिएँ ।’ विदेशको हकमा उनलाई एकदमै मनपरेको देश हो आयरलेन्ड । ‘त्यँहाको सुन्दरताले मोहित बनाएको थियो तर १० दिनकोमात्र भिसा भएकाले चाँहेजति घुम्न पाइनँ । अब मलाई इन्डोनेसिया घुम्न मन छ,’ उनले भनिन् । फरक–फरक ठाउँबारे अध्ययन गर्न, त्यहाँको रहनसहनबारे जान्न प्रितीलाई एकदमै रहर लाग्छ, त्यसैले उनी घुम्न रुचाउँछिन् । ‘मान्छेहरूलाई आफूले जेजति देखेको छु त्यति नै संसार हो भन्ने भ्रम छ त्यो तोड्नका लागि पनि फरक ठाउँ र फरक संस्कृति हेर्न÷बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ,’ उनी अरुलाई पनि घुम्न सुझाउँछिन् । घुम्न गएका बेला उनी सपिङप्रेमी पनि छिन् । ‘मलाई सपिङचाँही अलि बढी नै गर्नुपर्छ त्यसैले कहिलेकाँही सपिङकै लागि भनेर पनि घुम्न निस्किन्छु,’ उनले सुनाइन् । स्वदेशमा उनी बढी बुद्ध र यति एयरलाइन्समा यात्रा गर्न रुचाउँछिन् ।